OPDOn koree gidduu haaraa hedduu ofitti dabale. Maqaa haaraa -ODP jedhus moggaafateera. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOn koree gidduu haaraa hedduu ofitti dabale. Maqaa haaraa -ODP jedhus moggaafateera.
Paartichi Gadaan Gadaa tokkummaa, bilisummaa fi haaromsaa akka ta’uuf kutannoo agarsiisaa jira.
OMN Ful. 21, 2018 Qophii Egeree :Marii Sirna Federaalizimii irratti. – https://t.co/YLJDchaT8x pic.twitter.com/TiptX9yvXb
— Kichuu (@kichuu24) September 21, 2018
Dhawaata aangoo dabarsaa deemuun duudhaa sirna Gadaa keenyaati jedha Taayyee Danda’aa.
”Gaafa Oromoon Finfinnee Dhorkame Sana Qeerroo Seenaa Dalagan”
Qeerroon keenya nagaa eegsisa malee nagaa nama hin dhorku. Qeerroon Dirre dawaa Galatoomaa